केपी ओली र माधव नेपालको भेटले नेकपा विवाद समाधान गर्न सहयोग गर्ला? - BBC News नेपाली » Namasteholland.com
केपी ओली र माधव नेपालको भेटले नेकपा विवाद समाधान गर्न सहयोग गर्ला? – BBC News नेपाली
सत्तारूढ नेकपमा एमालेका शीर्ष नेताबीच चरम मतभेद देखिएका बेला ‘अप्रत्यासित रूपमा’ बुधवार साँझ अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनैले कारबाही गरेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटघाट भएको छ।
राजधानीको एक होटलमा भएको उक्त भेटले संवादहीनताको अवस्थामा परिवर्तन भएको तर त्यसले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने हेर्न कम्तीमा बिहीवार दिउँसो तय भएको बैठक कुर्नुपर्ने दुवै पक्षका नेताहरूले बताएका छन्।
नेपाललाई सुरुमा पार्टीबाट छ महिनाका लागि निलम्बन गरेको र पछि सांसद पदबाट किन नहटाउने भनेर स्पष्टीकरण मागेको पृष्ठभूमिमा भएको यो भेटलाई कतिपयले अप्रत्याशित ठानेका छन्।
तर दुवै पक्षका नेताहरू भने दुवै पक्षका विभिन्न तहका नेताबीच अनौपचारिक भेट भइरहेको बताउँछन्।
दूरी कम भएको हो?
ओलीले नेपालबाहेक पनि पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरूलाई समयावधि तोकेर निलम्बन गरेका छन्। नेपाल पक्षले पनि समानान्तर कमिटीहरू बनाइरहेको छ।
ओलीले सोमवार मात्रै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल सहितका २७ सङ्घीय सांसदहरूलाई सांसद पदबाट समेत हटाउन सक्ने सङ्केत दिने गरी लिखित स्पष्टीकरण मागेका थिए।
ओली पक्षले नेपाल पक्षले ‘फ्लोर क्रस’ गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा बुधवार दुई नेताबीच भएको भेटमा नेता नेपालले ओलीसमक्ष जेठ २ कै अवस्थामा फर्किन सके पार्टी मिलाउन सकारात्मक हुने बताएको उनीनिकट नेता रघुजी पन्तले बताए।
पन्तले भने, “अन्यायपूर्ण ढङ्गले जे जस्ता निर्णयहरू भएका छन् पार्टी अध्यक्षका हिसाबले तपाईँले सच्याउनुस् भन्ने कुरा माधवजीले केपीजीलाई भन्नुभयो। कुराकानी सुरु भएकोलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ।”
फागुन २८ गते अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूलाई एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनीत गरेका थिए भने त्यसपछिको बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको थियो।
पन्त भन्छन्, “अहिले त शीर्ष तहमा नेताहरूबीच संवादहीनताको अवस्था थियो। त्यो अवस्था तोडियो अहिलेलाई त्यति मात्रै बुझ्न उपयुक्त हुन्छ।”
“त्यसबाहेक सकारात्मक ढङ्गले अघि बढ्छ वा त्यतिमै रोकिन्छ त्यसबारे बोल्नु हतारो हुन्छ।”
ओली पक्षका नेता खगराज अधिकारीले भेटको आशय पार्टी एक राख्नु र दूरी कम गर्नु रहेको बताए।
अधिकारीले भने, “हाम्रो अपेक्षा दूरी कम गर्नु र कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता बचाइराख्ने काम होस् भन्ने हो। अब माधव नेपालहरूले जुन कदम लिनुभएको छ त्यो आत्मघाती छ।”
“त्यसमा उहाँहरू सच्चिनुभयो भने असाध्यै सकारात्मक परिणाम आउँछ।”
‘आत्मघाती कदम’ के हो? अधिकारी भन्छन्, “फ्लोर क्रस गर्ने, पार्टीका समानान्तर गतिविधि गर्ने जस्ताका कामहरू आत्मघाती छन्।”
सर्वोच्च अदालतले पार्टी विवादसम्बन्धी एउटा मुद्दामा नेकपा पार्टी पूर्ववत् अवस्थामै रहेको फैसला सुनाउनुअघि नै तत्कालीन नेकपाका असन्तुष्ट प्रचण्ड-माधव पक्षले समानान्तर कार्यक्रम गर्ने र छुट्टै बैठकहरू गर्ने गरेका थिए।
यसले दुवै पक्षबीच मतान्तर बढिरहेका बेला भएको बुधवारको बैठकको सन्देशबारे अधिकारीले भने, “[ओली] पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन चाहनुहुन्छ। अनुशासित, नियम र सिद्धान्तसँग सम्बन्धित भएर एकता हुनुपर्छ।”
“शरीर मिलाएर मात्रै हुँदैन, विचार र भावना पनि मिलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यही कुराको निरन्तरता हो।”
नेपाल पक्षका पन्तले भने अबको बाटो के हुने भन्ने अध्यक्षको कदममा भर पर्ने बताए।
उनले भने, “अध्यक्षका हैसियतले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने भन्नुभयो भने हामी त्यसका लागि जुनसुकै बेला पनि तयार छौँ। होइन मेरै कुरा मानेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सकारात्मक रूपमा कसरी अघि बढ्ला?”
अधिकारी विवाद समाधानका आधारबारे भन्छन्, “केपी ओलीलाई कारबाही गर्नेसम्म तमासा भयो। त्यो ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न केही समय लाग्छ।”
“सबैले धैर्यपूर्वक मुलुकको हितलाई शीर्ष स्थानमा राख्ने हो भने समस्या समाधान हुन्छ,” उनले थपे।